Maamulo KMG ah oo loo sameynayo gobollada dalka (Wareysi C/Kariim). - Caasimada Online
Home Warar Maamulo KMG ah oo loo sameynayo gobollada dalka (Wareysi C/Kariim).
Maamulo KMG ah oo loo sameynayo gobollada dalka (Wareysi C/Kariim).
Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa markii uu ka soo laabtay safarkiisii Baladweyne waxa uu VOA siiyey wareysi dhinacyo badan taabanaya, waxaana ugu horeyn uu ka jawaabay ujeedada socdaalka uu Baladwene ku tagay.
Wareysiga oo ku bilaabanaya jawaabta wasiirka halkan hoose ka dhagayso. Wareysiga Wasiirka Arrimaha Gudaha